Emva kokukhululwa kwizikrini zehlabathi ngo-2006, umdlalo kaRon Howard osekelwe kwintetho efanayo noDan Brown "I-Da Vinci Code" UTom Hanks ixesha elide uya kudibana neprofestile omncinci, onobunxantathu u-Robert Langdon. Uyazi okuninzi, unamandla okhethekileyo okwenza izigqibo ngokukhawuleza, usebenza kakuhle kungekhona nje ngentloko yakhe, kodwa kunye neentonga zakhe, kwaye ngenxa yeso sizathu umfazi omncinane nomhle ulungele ukuzinikela kuye, yinto nje yenkqubo yokwenza isikrini ayikho.
Abameli bobulili obufanelekileyo ngokubanzi banamaqhawe amakhulu kaTom Hanks - abazimeleyo, abathembekileyo nabanobindi bengabonakali. Kwanele nje ukukhumbula ezo ifilimu ngokuthatha inxaxheba njengokuthi "Ndibambelele Ukuba Unako", "Ukukhutshwa", "Ukugcina uRyan Private", "Nespyshchiev Seattle", "Incwadi Yakho", "Imfazwe kaCharlie Wilson", "Iingelosi kunye needemon" nabanye abaninzi. Ewe, zonke ezi ifilimu azikho malunga neHanks. Nangona "iMiddo Emihle YesiGriki" - malunga naye, nguye nje engekho kule filimu. Kwaye kutheni konke okufanayo?
Masiqale ukususela ekupheleni
NgoJulayi 9 kulo nyaka, uTom Hanks uza kufikelela kwiminyaka engama-57 ubudala, kwaye unako ukukhala ngokukhawuleza kunye nehlabathi lonke livakalisa ukuba akazange aphile ngeze. I-Hanks ithathwa njengowomdlali obalaseleyo kwihlabathi le-cinema, umlimi ongeyena kuphela ukuhlonishwa okukhulu kwabaphulaphuli kunye nentlonelo epheleleyo phakathi kwabaqeqeshi, kodwa kunye nomnini ohloniphekileyo wemigangatho emihle yase-Oscar - kwiindima eziphambili ePhiladelphia (1993) nase-Forrest Gump (1994) ), emnika isikhundla sokuba omnye wabalingisi ababini kwimbali ye-cinema yehlabathi, abaye bakwazi ukufumana eli bhaso ngokulandelana kwiminyaka emibini. Ngaphezu koko, uTom nguye kuphela umdlali ongufanelwe umrhumo weedola ezigidi ezingamashumi amabini. Oku akumangalisi, kuba kwi-akhawunti kaTom Hanks inani elikhulu lefilimu, elowo unako ukufumana kwi-ofisi yebhokisi yehlabathi jikelele ngeerandi ezigidi ezilisithoba. Kubonakala ukuba umsebenzi we-actor we-Hanks usebenze ngakumbi kunokuba uqoqosho lwamazwe amaninzi.
Akukho mntu oza kuthetha ukuba ukufaneleka akusoloko kuvuzwa ngendlela efanelekileyo, kodwa umculi apha kwaye akayi kukhononda malunga nantoni na. Ngokwenene ufumana umrhumo kwisixa semali engamashumi amabini, kwaye kwiimeko ezininzi kunye nepesenti echithwe kwingqesho. Ngokomzekelo, "I-Forrest Gump" yazisa inkwenkwezi yezigidi ezingama-70, kwaye "Khusela Private Ryan" - izigidi ezingama-40. Hamba ukuba unjani umdlali onamandla okwenza imali kwi "Code Da Vinci" okanye "Iingelosi kunye needemon" kunzima ukucinga. ezi ifilimu zazikwazi ukuqokelela kabini njengoko imifanekiso engentla ihlanganisiwe. Ngokubanzi, ukuguga kweHanks ngokwayo kunokwenzela.
Umdlali unesinye esinye isizathu esongezelelweyo, esinokuyenza: ukunyuka kwiindawo eziphakamileyo zobungangamsha, waqala nge-zero epheleleyo. U-Ieto, nangona ukuba ungowendlu yaseMerika yamandulo, kwaye amapolisa kamama unesihlobo somnye wabongameli base-United States - uAbraham Lincoln. Kodwa unina kaTom wayesebenza njengomseli olula, kunye noyise njengompheki. Xa inkosikazi yajika iminyaka emihlanu ubudala, abazali bakhe bahlukana baze bahlula abantwana (ngaphezu koko, intsapho yayineonyana ababini nentombi). Umdlali wexesha elizayo wayefudukela kuyise, kwaye njengoko wayeyintandane yokutshata, uTom wahamba noomama wakhe waya kwikomama ukuya esikolweni ukuya esikolweni. Umama wesibini wokugqibela waseHanks wayengumfazi wase-Asia, kwaye abantu abangaba ngu-50 babekho endlwini yabo, phakathi kwabo kuphela abamhlophe.
Ininzi zeenkwenkwezi ze-Western zefilimu zaqala ukusebenza kwazo ngeedrama zesikolo, kodwa uTom akazange akhathalele: njengentombazana engatshatanga, abafundi bakhe babecinga ukuba bangenanto kwaye abanqwenela ukuthatha isikolo. Omnye utitshala wobugcisa obukhulu unokuqwalasela into enentloni neyinkwenkwe. Ngoko, ngenxa yakhe, uHanks naye wangena kwiziko lezemidlalo. Ngenxa yomvuzo ophantsi womdlali wephondo, loo mfana kwakufuneka asebenze ixesha elide njengomkhanya kunye nomsebenzi wendawo. Wathengisa i-popcorn kwi-cinema waza wambatha iifotukethi kwenye yeehotele. Inxaxheba yokuqala ye-episodic yaya kumntu oneminyaka engama-24, apho eyifumana imali ephantsi.
Qhubeka ungafanelekanga ngento
Indima ephambili yomdlali weqonga eyenziwa kwinqaku le-TV "Abahlobo Abakhulu Bakhulu" (1981-82 gg.), Apho wayedlala indoda kwindlovukazi. Imifanekiso emihle kunye neengqungquthela zomdlali we-gay ngo-1993 wayesebenza kwifilimu ethi "Philadelphia", apho yamkela "i-Oscar". Ngomthendeleko wokunikezelwa kwebhaso, uHanks enkulumweni yakhe enombulelo wakhumbula umfundisi ofanayo kwaye wabonisa ukubonga kwakhe "uhambo oluya ebomini", egxininisa ukuba ungumlingani wesini. Ngendlela, xa efa, uTom wabela imali yokwakhiwa kwakhona kwethala lezemidlalo waza wamcela ukuba abe negama emva kootitshala.
Umdlali omncinci ngokwakhe wayefana nendoda engumfana, nangona ubomi bakhe bungazange banike izizathu zeso sikrokro: wayesele esatshatile eneminyaka engama-21 - kwaye ngexesha elide wayeseyise.
Umfazi wokuqala weHanks - USamantha Lewis, owayeneminyaka emine emdala kunabo, kunye nowaphupha umsebenzi wefilimu, wanika umlingisi wabantwana ababini, ukubingelela iphupha lakhe. Ngowe-1984, umdlali waba udumo ngendima yakhe kwi-comedy "Splash", kwaye umfazi wakhe waphinde waba nzima ukuhlala kwimpumelelo yomyeni wakhe. U-Hanks wenza intsebenzo kumfazi wakhe, kodwa umtshato wawunzima kakhulu.
Umfazi wesibini womdlali we-Rita Wilson (igama langempela uMargarita Ibragimova). Owesifazane ongumGrike owayengumntu ophethe izimpande zeBulgaria. Badibana kunye kwaye ngo-1988 batshata. U-Rita wathabatha ngokukhawuleza phezu komyeni wakhe omtsha: wavuma umtshato ngesigrike samaGrike, wathuthela e-Orthodoxy, wavuma ukulandela izithethe zabantu basezantsi, ukuhlonela zonke izihlobo zomfazi wakhe. Nangu kuwe kunye ne-movie "Wedding My Big Greek", efana nebali lenene likaTom Hanks, owajika waba ngumntu okhukhumele.
Njengomfazi wakhe wokuqala, uRita wazala abantwana ababini eHanks waza wangcwaba umsebenzi wakhe. Kodwa wabonisa ukhathalela kakhulu umsebenzi.
Isipho somtshato sikaHanks sasingumdlalo we "Big" - okokuqala ukubetha kwangempela. Kodwa ke ezinye iintsilelo ezilandelelanayo zilandelekile kwaye emva kokungaphumeleli kwe-comedy "uBhofire yokuzikhukhumeza", umsebenzi we-actor wahlala ekulinganisweni.
Umfazi wakhe wamcebisa ukuba atshintshe indima yakhe: wonke umntu wabona uTom kumdlali we-comedic, kodwa uRita wayeqinisekile ukuba uya kuhlangabezana neendima eziphawulekayo. Kwaye kwenzeka! Ifilimu yokuqala "Igalelo labo" (1992) liphumelele. Emva koko landela inani elikhulu lefilimu, apho umdlali wendiza edlala indima ephawulekayo, kwaye emva kwale filimu kunye nezigidi, "Golden Globes" kunye ne "Oscars." Emva kokuphumelela okuphefumulayo komdlali kunye nesinyathelo asinalo, ukuze angabonisane nomfazi wakhe. Ngaloo ndlela, ngo-2004, kwakunokufakela kwakhe uHanks "wadlala" kwidowuni "iPolar Express", ukuzalisa uhlahlo lwabiwo-mali lwama-dollar angama-20.
Kwakhona, ngokulandela isiluleko somfazi wakhe, uHanks ufaka imali "yesiGrike umtshato" kunye ... - Ifilimu iya kuba yimpumelelo kakhulu kwimifanekiso encinci yebhajethi kwimbali kwaye iqokelela ngaphezu kwezigidi ezingama-200 zeedola.
Ngomhla umdlali oqhubekayo ukwenza iifilimu: ngo-2013, ifilimu inxaxheba kuye "Ukulondoloza uMnu Banks", apho aya kudlala khona uWalt Disney, ulinde.
Umsebenzi: umbonisi weTV
I-Pea pancake nge-anyanisi
Izitya zokuqala nezokuhlwaya kwietafile
I-Pasta kunye namazambane kunye neembotyi